Numeri 5 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Vanhu vasina kuchena vanofanira kubudiswa mumusasa (1-4)
Kureurura uye kuripa (5-10)
Zvaiitwa kana mukadzi achifungirwa kuti akaita upombwe (11-31)
5 Jehovha akataurazve naMozisi, achiti: 2 “Udza vaIsraeri kuti vabudise mumusasa munhu wese ane maperembudzi+ nemunhu wese ane zvinoyerera+ nemunhu wese akaitwa asina kuchena nekubata munhu akafa.*+ 3 Munofanira kuvabudisa, vangava vanhurume kana vanhukadzi. Munofanira kuvabudisa mumusasa, kuitira kuti vasasvibise+ misasa yevanhu vandiri kugara pakati pavo.”+ 4 Saka vaIsraeri vakaita izvozvo, vakavabudisa mumusasa. VaIsraeri vakaita zvakanga zvaudzwa Mozisi naJehovha. 5 Jehovha akaenderera mberi achitaura naMozisi, achiti: 6 “Udza vaIsraeri kuti, ‘Kana murume kana mukadzi akaita chimwe chezvivi zvinoitwa nevanhu oita zvinhu zvekusatendeka kuna Jehovha, munhu iyeye anenge ava* nemhosva.+ 7 Anofanira kureurura+ chivi chake chaakaita, oripa zvinoenderana nemhosva yake, uye owedzerawo chikamu chimwe chete pazvishanu;+ anofanira kuzvipa waakatadzira. 8 Asi kana akatadzirwa wacho asina hama yepedyo ingatambira zvinenge zvaripwa zvacho, zvinofanira kudzorerwa kuna Jehovha uye zvichava zvemupristi, kunze kwegondohwe rekuyananisa raachamuyananisira naro.+ 9 “‘Mipiro yese mitsvene+ inounzwa nevaIsraeri kumupristi, inofanira kuva yake.+ 10 Zvinhu zvitsvene zvinounzwa nemunhu mumwe nemumwe zvicharamba zviri zvake. Chinhu chese chinopiwa mupristi nemunhu, chichava chemupristi.’” 11 Jehovha akataurazve naMozisi, achiti: 12 “Taura nevaIsraeri, uti kwavari, ‘Izvi ndizvo zvinofanira kuitwa kana mudzimai wemunhu akatsauka oita zvinhu zvisina kutendeka kumurume wake, 13 orara nemumwe murume,+ asi zvisina kuzivikanwa nemurume wake uye pasina akazviona, zvekuti anenge akazvisvibisa asi pasina chapupu chakamuona uye asina kubatwa: 14 Kana murume wacho akava neshanje achifungira mudzimai wake kuti haana kutendeka kwaari uye zviri izvo kuti mudzimai wacho akazvisvibisa, kana kuti murume wacho akava neshanje achifungira mudzimai wake kuti haana kutendeka kwaari asi iye asina kuzvisvibisa, 15 murume wacho anofanira kuuya nemudzimai wake kumupristi, pamwe nemupiro wemudzimai wake, chegumi cheefa* yefurawa yebhari. Haafaniri kudurura mafuta pamusoro payo kana kuisa zvinonhuhwirira zvichena pamusoro payo, nekuti iwo mupiro wezviyo* weshanje, mupiro wezviyo unoyeuchidza nezvemhosva. 16 “‘Mupristi achauya nemudzimai wacho mberi, omumisa pamberi paJehovha.+ 17 Mupristi achatora mvura tsvene nemudziyo wevhu, uye mupristi achatora guruva pasi mutebhenekeri, oriisa mumvura yacho. 18 Mupristi achaita kuti mukadzi wacho amire pamberi paJehovha uye achasunungura bvudzi remukadzi wacho, oisa mupiro wezviyo unoyeuchidza, kureva mupiro wezviyo weshanje,+ mumaoko emukadzi wacho, uye mupristi achange akabata mvura inovava inounza kutukwa.+ 19 “‘Mupristi achaita kuti mukadzi wacho apike, achiti kwaari: “Kana pasina mumwe murume akarara newe iwe uine murume wako+ uye kana usina kutsauka ukazvisvibisa, mvura iyi inovava inounza kutukwa ngairege kukukuvadza. 20 Asi kana wakatsauka uri pasi pemurume wako uchizvisvibisa, uye kana wakarara nemumwe murume+ asiri murume wako—” 21 Mupristi achabva aita kuti mukadzi wacho apike mhiko inosanganisira kutukwa, uye mupristi achati kumukadzi wacho: “Jehovha ngaaite kuti zita rako rishandiswe pakutuka uye pakupika pakati pevanhu vako, sezvo Jehovha achaita kuti chidya* chako chiondoroke* uye dumbu rako rizvimbe. 22 Mvura iyi inounza kutukwa inofanira kupinda muura hwako kuti iite kuti dumbu rako rizvimbe uye kuti chidya* chako chiondoroke.”* Mukadzi wacho anofanira kubva ati: “Ameni! Ameni!”* 23 “‘Mupristi anofanira kubva anyora mashoko aya ekutuka mubhuku, oageza achipinda mumvura inovava. 24 Achabva aita kuti mukadzi wacho anwe mvura inovava inounza kutukwa, uye mvura inounza kutukwa inofanira kupinda maari yomuvava. 25 Mupristi anofanira kutora mupiro wezviyo weshanje+ uri mumaoko emukadzi wacho, ovheyesa mupiro wacho pamberi paJehovha, ouya nawo pedyo neatari. 26 Mupristi achanokora mupiro wacho wezviyo kuti umiririre zvabviswa zvacho oita kuti upfungaire paatari,+ kana adaro achaita kuti mukadzi wacho anwe mvura yacho. 27 Paanomuita kuti anwe mvura yacho, kana mukadzi wacho akazvisvibisa uye akaita zvekusatendeka kumurume wake, mvura inounza kutukwa ichabva yapinda maari yomuvava, dumbu rake rozvimba, chidya* chake choondoroka,* uye zita remukadzi wacho richashandiswa pakutuka pakati pevanhu vake. 28 Asi kana mukadzi wacho asina kuzvisvibisa, uye akachena, achange asunungurwa pachirango chakadaro, uye achakwanisa kubata pamuviri uye kuva nevana. 29 “‘Uyu ndiwo mutemo pamusoro peshanje,+ kana mukadzi atsauka ozvisvibisa ari pasi pemurume wake, 30 kana kuti, kana murume akava neshanje, ofungira kuti mudzimai wake haana kutendeka; anofanira kuita kuti mudzimai wake amire pamberi paJehovha, uye mupristi anofanira kumushandisira mutemo uyu wese. 31 Murume wacho achange asina mhosva, asi mudzimai wake achazvidavirira mhosva yake.’”
^ Kana kuti “mweya iwoyo unenge wava.”
^ Zvinoratidza sekuti pari kutaura nezvenhengo dzekubereka nadzo.
^ Zvinogona kunge zviri kureva kusakwanisa kubata pamuviri.
^ Kana kuti “Ngazviitike! Ngazviitike!”